GAROWE, Puntland - Madaxweynah Puntland, Saciid Cabdullaahi Deni ayaa war kasoo saarey dilkii iyo Kufsigii lagula kacay Caasha Ilyaas Aadan, oo ahayd gabar 13 sano jir ah.
Qoraal kasoo baxay Madaxtooyadda Puntland ayaa lagu sheegay in Madaxweyne Deni uu amar ku siiyay hay'adaha amniga inay si deg deg ah uga howlgalaan baarista kiiska Gabadha.
Madaxweynaha ayaa dhanka kale tacsi u diray qoyska, eheladda iyo dhamaan shacabka Soomaaliyeed, oo la murugoonayay dilkii arxan darrada ahaa ee loogu geystay waqooyiga Gaalkacyo, Caasha Ilyaas habeenkii Axada ee lasoo dhaafay.
Dilka Gabadhan yar ayaa kiciyay carro dadweyne, iyadoo magaaladda Gaalkacyo lagu soo waramyo inuu ka socdo dibadbax maalintii labaad, kaaso oo looga soo horjeedo falka foosha xun ee lagula kacay AUN Caasha Ilyaan Aadan.
Baraha Bulshada ayaa si weyn looga hadal hayaa dilka iyo kufsiga ka dhacay Gaalkacyo, kaaso oo noqonaya midkii labaad oo bishan gudaheeda ka dhacay magaaladdan oo ay kawada taliyaan Puntland iyo Galmudug.
HALKAN KA AKHRI WAR-SAXAAFDEEDKA:
Puntland ayaa mudadii ay jirtay waxaa maamuladdii soo maray sameeyeen dedaallo...
Madaxweynah cusub ee Puntland oo soo saarey Wareegtadii 2aad [Akhriso]
Puntland 13.01.2019. 11:06
Deni oo la kulmay Mas'uuliyiinta Wasaaradda Maaliyadda iyo Bangiga Dhexe
Puntland 12.01.2019. 15:45
Ciidamada Puntland oo Howlgal magac cusub loo bixiyay ka billaaabey Gaalkacyo
Puntland 28.02.2019. 14:39
Madaxweynaha Puntland oo magacaabey Xukuumad kooban [Magacyada]
Puntland 10.02.2019. 23:59